ကဒ်ငွေပေးချေစနစ် လေးမျိုးတွေ့ပါသည်။ ဘယ်ဟာကိုရွေးရမလဲ? – FBS
ကျွန်တော်ကဒ် ငွေထည့်သွင်းမှု ပယ်ချခံရသည်၊ ဘာကြောင့်လဲ?
ကဒ်ငွေပေးချေစနစ် လေးမျိုးတွေ့ပါသည်။ ဘယ်ဟာကိုရွေးရမလဲ?
ကဒ်ငွေပေးချေစနစ်တစ်ခုစီတွင် မတူညီသောနိုင်ငံများတွင် ရနိုင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်သည် ဤငွေပေးချေမှုစနစ်လေးခု (Visa/Mastercard/Maestro၊ Visa၊ Connectum၊ Connectum၊ နှင့် Visa/Mastercard) မှ ရွေးချယ်နိုင်သော ကံကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပုံရသည်။
ဤငွေပေးချေစနစ်များကြားတွင် ကွာခြားမှုမရှိပါ။ ထည့်ငွေ ကော်မရှင်ကို FBSမှပြန်ပေးပါသည်။ ကော်မရှင် ထုတ်ယူခြင်းအတွက်:
Visa/Mastercard/Maestro DP: 2.5% + €0.3; WD: €2
ဘယ်ငွေပေးချေစနစ်ကို သုံးရမလဲ? သင့်အပေါ်မူတည်ပါသည်!
ကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သော တစ်ခုတည်းသော အကြံပြုချက် - သင့်ကိုယ်ပိုင်ကတ်များကို အမြဲသုံးပါ နှင့် ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်အတွက် ကတ်တစ်ခုတည်းကိုသာ အသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ။ ကတ်အများကြီးသုံးမိပါက၊ ထိုသို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များသည် လိမ်လည်မှုဟု ယူဆနိုင်ပြီး ဤငွေပေးချေမှုစနစ်မှတစ်ဆင့် အပ်ငွေများကို ပိတ်ဆို့သွားမည်ဖြစ်သည်။